झन् वि’वादित बन्दै कंगना: मुम्बईलाई कश्मिरजस्तो भनेपछि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरले दिईन् चे’तावनी – Articles Nepal
झन् वि’वादित बन्दै कंगना: मुम्बईलाई कश्मिरजस्तो भनेपछि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरले दिईन् चे’तावनी
३० भदौ काठमाडौं: बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावत आफ्नो वि’वादित ब’यानका लागि परिचित छिन्। जे होस्, उनले आफ्नो ब’यानको कारण धेरै पटक वि’रोधको सामना गर्नु परेको छ। हालसालै उनले मुम्बईलाई पाकिस्तानको अधिकृत साथै कश्मीरजस्तो भनेर टि’प्पणी गरिन् र त्यसपछि उनले धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्यो। यसैबिचमा एक अन्तरवार्तामा अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरले कंगनाको ब’यानबि’रुद्द खुलेरै नि’न्दा गरेकी छिन्।
उर्मिलाले भनिन्, “सम्पूर्ण देश ला’गुपदार्थ सम्बन्धी समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ। के उसलाई थाहा छ हिमाचल ड्र’ग्सको एक ग’ढ हो। उसले यो ल’डाई आफ्नै राज्यबाट सुरु गर्नुपर्दछ। उसलाई करदातापैसाले सरकारले सेक्युरिटी दियो, उसले किन गर्दैन? पुलिसलाई ला’गूपदार्थको नेक्ससको बारेमा उ किन भन्दिन? कुनै शंका छैन कि मुम्बई सबैको हो। तर यहाँका पुराना बासिन्दाको पहिलो अधिकार छ। ”
उनले थपिन्, “जो कसैले यस शहरलाई माया गरेका छन् र उनीहरुले शहरलाई केहि फिर्ता दिएका छन् … शहरकी छोरीको रूपमा, म यस शहरको छवि बि’गार्ने कुनै पनि टि’प्पणीलाई सहने छैन। जब तपाइँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ, केवल शहरको छवि बि’ग्रेको छैन, तपाईंले यहाँ मानिसहरूलाई पनि चो’ट पुगेको छ। ”
Previous Post: प्याजमा जताततै कालोबजारी: प्याज बोकेर आएका ट्रक नै हराए….
Next Post: कुलमानका स’मर्थक र प्रहरीबीच माइतीघरमा झ’डप;(भिडियो हेर्नुस्)